के प्रेमीकाको ‘चक्कर’ छ छैन थाहा पाउन मन छ ? यता हेर्नुहोस् - हस्तरेखा बिज्ञान -
तपाई हस्तरेखा विज्ञान र ज्योतिस विज्ञानमा कत्तिको बिश्वास गर्नुहुन्छ ? हातका रेखाले धेरै कुरा बताउँछ । कुनै मानिसको कहिले बिहे हुन्छ, कति बच्चा हुन्छन्, जागिर कस्तो हुन्छ ? यी सबै कुराहरु हस्तरेखामा हुन्छ । बस्, त्यसलाई ठीकसँग हेर्न जान्नुपर्ने हुन्छ । कयौंपटक केटाहरु आफ्नो प्रेमिकाप्रति शंका गर्दछन्, पहिला उनको कसैसँग सम्बन्ध थियो कि ? यस्तो सोचले सम्बन्धमा खटपट पनि पैदा हुन्छ । यसकारण यस्तो आशंका हटाउनु सम्बन्धका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसको लागि तपाईले केवल उनको हातको विशेष रेखाहरु हेर्नुपर्छ र उनको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन सकिन्छ । ज्योतिषहरुका अनुसार हातको रेखालाई व्यक्तिको ऐना मानिन्छ जसको आधारमा व्यक्तिको चरित्रलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ । हातमा बनेका यिनै रेखाहरुमा एक रेखा हो विवाह रेखा । विवाह रेखालाई हेरेर कस्तो व्यक्ति वा महिलाको कतिपटक विवाह हुन्छ र उनको कति मानिससँग चक्कर थियो भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
विवाह रेखा हातको कान्छी औंलाको ठीक तल बुध पर्वत भनिने भागमा हुन्छ । यहाँ माथिको चित्रमा देखाइएजस्तै गोलोको भित्र पर्दछ । यो एकआपसमा काटिएको हुन्छ । हस्तज्योतिषहरुका अनुसार यदि यहाँ जति रेखाहरु हुन्छन्, त्यो व्यक्ति वा महिलाको त्यतिजनासँग प्रेम प्रसंग चलेको हुन्छ । यदि बुध पर्वतमा बनेको यो रेखा टुंगिएको वा काटिएको छ भने विवाहपछि सम्बन्ध विच्छेद वा प्रेम सम्बन्धमा गडबडी आउने सम्भावना रहन्छ । यति मात्र होइन यो रेखाले तपाईंको दाम्पत्य जीवनको बारेमा पनि बताउँछ । यदि त्यहाँको रेखा तलतिर गएको हुन्छ भने पारिवारिक जीवनमा अत्यधिक समस्याहरु सामना गर्नुपर्दछ ।
यदि कुनै व्यक्तिको देव्रे हातमा दुई विवाहको रेखाहरु छन् तथा दायाँ हातमा एक मात्रै विवाहको रेखा छ भने पत्नीले उनलाई अत्यधिक प्रेम गर्द्छिन् । साथै श्रीमानको सामान्यभन्दा सामान्य कुराको पनि ध्यान दिन्छिन् ।
Previous जव रेस्लिङ्गको रिङ्गमा उत्रीईन् यी हट अभिनेत्री: रेस्लरले गरे यस्तो अश्लिल हर्कत (भिडियोसहित )
Next यसरी तस्बिरमा जस्तै बुढी औंलाले कान्छी औंला छुनुस, यदि तपाइको टेण्डन देखियो भने सम्झनुस यस्तो बिशेष हुन्छ!